nepalgunj youn akhada ma police chhapa : Sanjaal Ganthan
Raid In Nepalgunj Hotels – 20 Couples Involved In Illegal Sexual Activity Arrested
March 21, 2012 by rumblefish · LeaveaCommentFiled under: Nepal - Sex Prostitution and Social Issues २० जोडी पक्राउ, १६ बिरुद्ध मुद्दा
नेपालगन्ज , श्रावण १८ – प्रहरीले बिभिन्न होटलहरुमा छापा मारेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न २० जोडीलाई पक्राउ गरेको छ ।
अपराधिक र बेश्यावृतिका घटनाहरु रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगन्जका होटलहरुमा परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गरेको छ । अव होटल व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीहरुको स्पष्ट परिचय खुल्ने परिचयपत्र आफैसँग
राख्नुपर्ने छ । यसअघि बिभिन्न समयमा परिचयपत्रको व्यस्था लागू गरिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन । यस्तो व्यवस्था उल्लंघन गर्ने व्यवसायीहरु माथि कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
साउन ७ गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीले होटलहरुमा छापा मार्न शुरु गरेको हो । प्रहरीले नेपालगन्जका होटलमा छापा मारेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको अभियोगमा ४० जना युवा-युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । न्युरोड, बसपार्क, बिपिचोक, धम्बोजी लगायतका क्षेत्रका बिभिन्न होटलहरुबाट उनीहरु पक्राउ परेका हुन । पक्राउ पर्नेमा सेनाका चारजना जवान समेत छन ।
नगरका शिव गेष्ट हाउस, मनकामना, भरिपुर्ण, साईनो, स्वस्तिक, रोयललगायतका होटलहरुबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । अबैध यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न पाइएकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरुमध्ये नौ जना १८ बर्ष मुनिका छन् । पक्राउ पर्ने पुरुषहरुमा बैंकका कर्मचारीहरु, व्यापारीहरु र विद्यार्थी छन् । केही युवतीहरु काठमाडौबाट समेत यौन व्यवसायका लागि नेपालगन्ज आएको भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । होटलहरुमा यौन व्यवसाय हुने गरेको खबर पाएपछि छापा मारिएको प्रहरी उपरीक्षक महेश बिक्रम शाहले बताए । यौन व्यवसाय गराउने होटल संचालकलाई पनि कारबाही गरिने उनको दाबी छ ।
प्रहरी निरीक्षक खेमबहादुर केसीका अनुसार, बिभिन्न चरणको अनुसन्धान पछि केहिलाई सम्झाएर अभिभावकको जिम्मा लगाईएको छ । १६ जनालाई सार्बजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाईएको छ । ‘ब्यवसायिक रुपमा संलग्न र पटक पटक पक्राउ परेकाहरु माथि कानुनी कारवाही सुरु गरिएको छ ।’ निरीक्षक केसीले भने ।
प्रहरीले अनुमानका भरमा निर्दोष व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै केही होटल व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपालगन्जका होटल व्यवसायीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर प्रहरीले परिचयपत्रको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रहरीले उक्त व्यवस्था लागू गर्न अटेरी गरे व्यवसायीहरु माथि कारवाही गरिने जनाएको छ । होटलमा लुटपाट, हत्या र आत्महत्याका घटनाहरु बढिरहेकाले स्पष्ट रुपमा परिचय खुल्ने प्रमाण राख्न ब्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
परिचयपत्र थप नराख्दा अपराधी सजिलै उम्कने गरेको प्रहरीको भनाई छ । व्यवसायीहरुले भने परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएपनि तत्काल लागू गर्न नसकिने दावी गरेका छन् । होटल अर्गनाईजेशन बाँकेका अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्था लागू हुन नसक्ने बताए । ‘हामीहरु पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न चाहान्छौं तर केही समय लाग्छ’-उनले भने ।
Nepal Police and Flesh Trade of Kathmandu Valley
Problems in implementing policies if outlaws of Kathmandu not brought to Justice
Gharwali Nepal Ma Baharwali Pradesh Ma
खासामा बेचिंदै नेपाली बैंस
Pokhara Sees An Increased Number Of Professional Sex Workers In Nepal
Blooming Prostitution In Janakpur Hotels (Article)
नेपाली युवती अन्तर्राष्ट्रिय यौन-सञ्जालमार्फत यौन-व्यवसायमा
Chinese Brothel In Nepal? Police raid in Thamel area finds so.
Pooja Lama – Another Nepali Actress In Sex Scandal Video Release
Nepalese Among Top Ten Searcher for Online Sex Contents
Originally posted 2010-08-03 20:10:23. Tags: hotels in nepalgunj need to have customers indentification, illegal sexual activity in Bharipurna Hotel Nepalgunj, illegal sexual activity in Mankamana Hotel Nepalgunj, illegal sexual activity in nepalgunj, illegal sexual activity in Royal Hotel Nepalgunj, illegal sexual activity in Shiva Guest House Nepalgunj, illegal sexual activity in Swastik Hotel Nepalgunj, nepalgunj buspark police sex raid, nepalgunj ka hotel haruma keta keti pakrau, nepalgunj ka hotel ma youn byabasaya, nepalgunj ka hotel ma youn janya dhanda, nepalgunj newroad BP Chowk sex raid, nepalgunj newroad police sex raid, nepalgunj youn akhada ma police chhapa, police raid nepalgunj hotels sexual acitivity, sex trafficking in nepalgunj, youn janya kriyakalap User:
Pooja Lama – Another Nepali Actress In Sex Scandal Video Release - 363,791 viewsFree Online E Book Collections Of Paulo Coelho – Read /Download - 89,571 views100 Plus Best Mehendi Henna Design Pictures For Wedding or As A Temporary Tattoo - 58,155 viewsNepali MP3s - 32,125 viewsNamrata Shrestha – The Nepali Actress In Scandal - 29,506 viewsNepali Movie – Sano Sansar – Watch Online [Full Length] - 27,613 viewsGuitar Tabs - 25,151 viewsLyrics – COD Band – Behoshi - 18,675 viewsNepali Joke 20 – Alchhi Nepali Haru - 17,801 viewsNepali Joke 19 – Nepali Girlfriend Wears Moms Mini Skirt - 17,791 viewsLyrics – Aastha – Antim Maya - 16,880 viewsNepali Remix - 16,515 viewsBar Girls of Kathmandu – By Sudeshna Sarkar - 15,699 viewsWhat is seen at “Sex Dance Bar” in Kathmandu - 15,366 viewsCommunity Problem – Teenaged Girls Strip Every Night At Kathmandu Dance Bars - 15,236 viewsHistorical Pictures Of Nepal  - 13,155 viewsSome Nepali Actress Pictures - 13,076 viewsList of Nepali Surnames (C-J) - 12,906 viewsVijaya Dashami (Dashain) and Deepawali (Tihar) Ecards For Free - 11,987 viewsList Of Nepali Surnames (S-Z) - 10,880 views